अभिनेत्री निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा आयो यति धेरै सुधार , निशाका बुवा भन्छन- छोरी बोल्न थालिन ! – Khabarbot
काठमाडौं–नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । उनका बुबा प्रेम घिमिरेका अनुसार निशाको पुनः उपचार सुरु गरिएपछि उनको स्वास्थ्यमा पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । ‘पहिला उसले केही बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुँदैछ । म हिजो हस्पिटल गएर ‘छोरी के छ ? भनेर सोधेको थिएँ । उसले ‘हा’, ‘हो’ गरेर रुन खोजी’, प्रेमले भने, ‘म घर जान्छु, यहाँ भाइ बसेको छ भनेर फर्किएँ । सोचेभन्दा राम्रो सुधार भएको छ ।’
प्रेमले छोरीको अनुहार ‘फ्रेस’ देखिएको खुलाए । ‘छोरीको अनुहारमा चमक आएको छ । उसको अनुहार हेर्दा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्नेमा परिवार आशावादी छौं’, उनले खबरहबसँग भने, ‘दुर्घटनापछि छोरी मुढा जस्ती भएकी थिइन् । बोल्ने अवस्था पनि थिएन । अहिले ‘हा’, ‘हो’ गरेर भए पनि बोल्ने भएकी छन् ।’ तीन वर्षअघि मोडलिङ पढ्न भारतको देहरादुन पुगेको डेढ महिनामा नै निशा सडक दुर्घटनामा परेकी थिइन् । दुर्घटनामा टाउकोमा ग म्भीर चो ट देहरादुनमा प्राथमिक उपचार गरेर उनलाई काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको थियो ।
प्रेमले छोरीको उपचारमा हालसम्म ३० लाख रुपैंयाँ बढी खर्च भइसकेको जनाए । उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थाहा पाएपछि नर्भिक अस्पतालकी निर्देशक मेघा चौधरीले घरबाट उद्धार गरी नर्भिकमै निःशुल्क उपचार गराइरहेकी छन् । तीजको गीतको भिडियोबाट मोडलिङ यात्रा सुरु गरेकी निशाले तीन दर्जन बढी म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी थिइन् । उनले फिल्म ‘मधेशीपुत्र २’, टेलीफिल्म ‘डियर जिन्दगी’मा पनि अभिनय गरेकी थिइन् ।